दरबारको भोज (लघु कथा) – Chitwan Post
दरबारको भोज (लघु कथा)
उपस्थित सबै भाइ–भारदारहरु आआफ्नो दर्जाअनुरुपको चाँद तोडा मानसम्मानका पदकहरु झुन्ड्याएर लाम लागेका थिए । महाराजको सवारी हुने कुरा उनको रिसल्लाले जानकारी गरायो । पद र मानको नयाँ अवसरवालाहरुले सवारीको समयमा जयजयकार लगाए । महाराजले सबैलाई आआफ्नो आसनमा बस्ने इशारा गरे ।
घन्टौँ उभिएर थाकेका रिक्रुटहरु बस्न पाउँदा महाराजबाट ठूलै निगाह बक्स भएको अनुभूति गरे । सम्बोधनको क्रममा ठूलो बलिदान, संघर्ष र मेहनतबाट प्राप्त सत्ता जोगाउने काम हामी सबैको हो । सत्ता संरक्षणमा त्याग भावनाले एक्का भएर लागिरहनु हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु । यसो भनिरहँदा महाराजले चारैतिर आँखा घुमाए । चाकरहरु महाराज र भारदारहरुको चाला देखेर लुकी–लुकी हाँसो फुत्काइरहेछन् ।
सामान्य शिष्टाचार र राजपाठको कर्मकाण्डी सम्बोधनपश्चात् भारदारहरुलाई रात्रिभोजका लागि आह्वान भयो । भोजनालयको आसनमा बसेर महाराजले स्याम्पेनको गिलास उचालेर भोजको सुरूवात गरे । भोजका अगाडि टेबलमा दायाँबायाँ राखिएका काँटा, चम्चा, रूमाल (वेट फ्रेसनर) प्लेट, सर्भिस पट, स्पुन के के हो के के ? भारदारहरुका आँखा तिर्मिरायो, दिमागले काम गरेन । सुरूसुरूमा अर्कोले कसरी प्रयोग गर्छ ? भनेर हेरे, सिक्न खोजे ।
जब जब सोमरस उदरस्थ हुँदै गयो । भारदारहरुले भोजका सबै औपचारिक दरबारी मान्यतालाई बिर्से । सबैले आआफ्नै हातले भोजनका चौरासी व्यञ्जन सफाचट गर्दै रहे । महाराज बीचबीचमा भारदारहरु बसेतिर आउँदै जाँदै गरे । उनका नजिककालाई धैर्यताका साथ खानू भन्दै सुझाइरहे । उनको चालमा सत्ताको राप, ताप र उन्माद झल्किएको छ । आफ्ना सेनापतिलाई बोलाएर कानमा के फुसफुसाए ? उनी सतर्क मुद्रामा उभिएर उर्दी जारी गरे । महाराज शुकलामा सवारी हुने बेला भयो, बिदाइ सलामी दिन भने । सबैले जुठै हातले सलामी दिए । महाराज मखलेल मुद्रामा बिदा भए ।
महाराजको शुकला बिदाइपछि भारदारहरुको मदिरा भोजको कार्यक्रम चल्यो । वरिष्ठ र कनिष्ठको सबै औपचारिकता समाप्त भयो । एकले अर्कालाई एकार र उकार लगाएर सवाल–जवाफ सुरू भयो । ए काइँला, यो विदेशीले मुख पोल्यो ! घरको लेराएको छस् ? छ दाजू हजुर ! ले…रा । लरबरिएका स्वरहरुमा सत्ताको थैली खुल्दै गयो ।
चन्द्र र सूर्यको आयु समाप्त भए पनि सत्ता टिकाउने कसम खाएका भारदारहरुको सपथ भोलिको सूर्य नउदाउँदै रातको अँध्यारोमा विलुप्त भैरहेछ । सत्ता–संघर्षको नयाँ–नयाँ स्वरुप निर्माण भैरहेछ । सबैभन्दा ठूलो कुरा भोलि बिहान पढिने मुख्य समाचारको रिहर्सल भैरहेछ ।
हिजो आयोजना गरिएको दरबारको भोजले महाराजको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक भएको छ । कार्यवाहक महाराजको नाम पढ्न आएका समाचार वाचकहरुलाई दूरदर्शन कार्यालयमा रातभर जागै राखिएको छ । मध्यरातको अँध्यारोमा बाहिर दुई स्वर सुनिएको छ । खबरदार…..! खबरदार…..!! चौकीदारको आवाज र कतै टाढा भुकिरहेको कुकुरको…..हाउँ…..हाउँ…..।